डा. लाेचनलार्इ एक लाखकाे पुरस्कार « Deshko News
डा. लाेचनलार्इ एक लाखकाे पुरस्कार
काठमाडाैं, भदाै ४
डाक्टर लाेचन कार्की रामप्रसाद-कृष्णलक्ष्मी तथा लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति सम्मानबाट पुरस्कृत भएका छन् । शनिबार राजधानीमा भव्य कार्यक्रममाबिच कार्कीलार्इ सम्मान सहित पुरस्कृत गरिएकाे हाे । पुरस्कार राशी एक लाख पाँच हजार रहेकाे छ ।
विकट जिल्लाका नागरिककाे स्वास्थ्य उपचारमा सक्रिय रहेकाे भन्दै डाक्टर कार्कीलार्इ कृष्णलक्ष्मी-लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानले नगद सहित सम्मान गरेकाे हाे । वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमाेहन जाेशीले पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । भाेजपुरकाे प्याउली घर भएका कार्कीले इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेका छन् । विकट जिल्लाका गरिव जनताकाे सेवामा कार्की तल्लिन छन् ।
प्रतिष्ठानले कार्कीसँगै अन्य तीनलार्इ पनि सम्मान गरेकाे छ । भाेजपुरकाे दाँवामा जन्मेर देश र जिल्लकाे सेवामा समर्पित डा. दिपक सैजु, डा. कमल काेइराला र डा. भगवान खड्कालार्इ सम्मान गरेकाे हाे । डा. सैजुले अमेरिकास्थित टाेलेडाे विश्वविद्यालयबाट साेलारसेलमा पिचडी गरेका हुन् । डा.काेइरालाले ग्यास्ट्राे इन्टरलाेजीमा र खड्रकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिचडी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पुर्वमन्त्रीहरू शेरधन रार्इ, शंकरप्रसाद काेइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकाे उपस्थिति थियाे । त्यस्तै सांसदहरू रामहरी खतिवडा, माेहन रार्इ उपस्थित थिए । सम्मान समाराेहमा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरिक्षक दुर्ज कुमार रार्इ, पुर्व प्रधानसेनापति रूक्मांगद कट्वाल, पूर्व सचिवहरू लगायतकाे उपस्थिति थियाे ।
क्रममा दुर्ज कुमार रार्इ, रामहरी खतिवडा, शेरधन रार्इ र शंकरप्रसाद काेइरालाले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । सम्मान कार्यक्रममा बाेल्दै प्रमुख अतिथी जाेशीले प्रतिष्ठानले राम्राे कामकाे शुरूवात गरेकाे भन्दै खससी ब्यक्त गरे । यत्ता कार्यक्रमा ७५ वटै जिल्लामा हुनु पर्ने र यस्ता प्रतिष्ठानहरू समाजप्रति वफादार हुनुपर्नेमा जाेशीकाे जाेड थियाे ।
पुरस्कार पाएपछि डा. कार्कीले थप जिम्मेवारी बढेकाे बताए । पुरस्कारले हाैसला मिलेकाे छ, थप सेवाभाग जागृत गरेकाे छ उनले भने । भाेजपुर र देशकाे सेवाभावमा उल्लेखनिय याेगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलार्इ अागामी दिनमा सम्मान गरिने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राेश
न श्रेष्ठले बताए ।